Go Ayano – Stars – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Gantz: Perfect Answer (2011) Unicode ဒီကားလေးက Gantz နံပါတ် ၁ ကားရဲ့ အဆက် အပိုင်း ၂ ပါ အပိုင်း ၂ မှာတော့ အပြောင်းအလဲတစ်ချို့ နဲ့ ထူးခြားလာပါတယ် ကာတို ကို အသက်သွင်းဖို့ အမှတ်ပြည့်ရအောင် ကြိုးစားနေတဲ့ ခေး တစ်ယောက် အခက်အခဲတွေ အများကြီး ရင်ဆိုင်ရပါပြီ လူသစ်တွေ လဲ နေ့တိုင်းရောက်လာသလို သူတို့ Mission ဝင်နေတဲ့ အခန်းတွေဟာ သက်ရှိ ကမ္ဘာကြီးနဲ့ ဆက်စပ် နေတယ်ဆိုတာကိုလဲ တစ်ဖြေးဖြေး သိလာကြပါတယ် သူတို့ Mission တစ်ခါဝင်ပြီးတိုင်း ပြင်ပ ကမ္ဘာမှာလဲ ပျက်စီးမှုနဲ့ လူသေမှု ပျောက်ဆုံးမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်… ပိုဆိုးတာကတော့ အနက်ရောင် ဘောလုံး ရဲ့ ခိုင်းစေမှု နဲ့ လူသစ်တွေ ပို့ပေးနေတဲ့ ရုပ်ရှင်မင်းသမီး တစ်ယောက် ရယ် ဒီ အနက်ရောင် ဘောလုံး ...
Gantz (2010) Unicode Anime ကနေ Live Action ပြန်ရိုက်ထားတဲ့ Gantz ဆိုတဲ့ imdb 6.5 ရထားတဲ့ ဂျပန်စိတ်ကူးယဉ် ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်. Gantz : O ဆိုပီး Animation ဇာတ်ကားလေးကိုလဲအရင်ကတင်ပေးဖူးပါတယ်။ အခု Gantz 2010 ဇာတ်လမ်းမှာတော့ Kei Kurono တစ်ယောက် ရထားစောင့်နေရင်း ရထားလမ်းပေါ်မှာမူးပီးလဲနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို သူ့သူငယ်ချင်း Masaru Kato ကကယ်ရင်းရထားတိုက်ခါနီးအခြေအနေမှာသွားရောက်ကူရင်းသူပါ ရထားတိုက်ခံရပီး တမလွန်ဆန်ဆန်နေရာတစ်ခုမှာ ကစားပွဲတွေကစားဖို့ ဖြစ်လာတဲ့ အခါမှာတော့ ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်မလဲ ဆိုတာ ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ရိုက်ချက်အလန်းတွေနဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းဇာတ်ကားတွေနှစ်သက်သူတွေအတွက် ဒီကားကိုလက်မလွတ်သင့်ပါဘူး ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Van ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi Anime ကေန Live Action ျပန္႐ိုက္ထားတဲ့ Gantz ဆိုတဲ့ imdb 6.5 ရထားတဲ့ ဂ်ပန္စိတ္ကူးယဥ္ ဇာတ္လမ္းေလးကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္. Gantz : O ဆိုပီး ...
Rurouni Kenshin Part I: Origins (2012) Unicode ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ ဟိုးအရင်တုန်းက တီဗွီမှာ လာခဲ့ဖူးတဲ့ ပါးပေါ်မှာ ကြက်ခြေခတ်ရာလေးနဲ့ ဓါးသမားလေး ဟီမူရာဘတ်တိုဆိုင်း (ခေါ်) ဟီမူရာကန်းရှင်း ကာတွန်းဇာတ်လမ်းတွဲ ကို Live Action အနေနဲ့ ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ကားပါ။ Trilogy သုံးကားတွဲဖြစ်ပြီး ယခု ပထမကားမှာတော့ ကန်ရှင်းဟာ ကာတွန်းထဲကလိုပဲ ခြေသလုံးအိမ်တိုင်သွားလာရင်း ကာအိုယူ ၊ ဆာနိုစကီ ၊ မျိုးဂျင် တို့နဲ့ ဆွေမျိုးတွေလို ရင်းနှီးသွားပုံတွေ။ သူ့နာမည်ကို အသုံးချကာ လူသတ်နေတဲ့ လူဆိုးကြီးကို နှိမ်နင်းပုံတွေကို ရိုက်ပြထားတာပါ။ Warner Bros ရုပ်ရှင်ကုမွဏီကနေ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပီး တိုက်ခိုက်ရေးပိုင်းတွေ ကင်ဒိုဓါးခုတ်လွှဲပုံတွေဟာ အသက်ပါလွန်းတာကြောင့် ကြည့်ရသူ ရင်တမမနဲ့ ဖြစ်စေမယ့် ဂျပန်ဓါးသိုင်းစွမ်းရည်ကို အသားပေး ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ Credit - Review Zawgyi ဒီဇာတ္ကားေလးကေတာ့ ဟိုးအရင္တုန္းက တီဗြီမွာ လာခဲ့ဖူးတဲ့ ပါးေပၚမွာ ၾကက္ေျခခတ္ရာေလးနဲ႔ ဓါးသမားေလး ...